I-China pp ibhokisi likathayela elinomkhiqizi kanye nomphakeli | Sihai
Ibhokisi lozimele elingenalutho futhi lingasetshenziswa ezimbonini eziningi, njengokupakisha, ukuhambisa, ibhokisi lenzuzo, izitoreji, ishede, ukuthunyelwa kwemikhiqizo njalonjalo. Ibhokisi lohlaka lukathayela nalo lingaba ibhokisi le-ESD nebhokisi eliqhubayo, elisetshenziswa kakhulu ku-elekthronikhi, imikhiqizo ye-elekthronikhi, inzuzo engenayo yezingxenye ze-elekthronikhi, izingxenye zezingcingo nezingxenye zezimoto zokuthumela nemali engenayo.
Ibhokisi lenzuzo elitholakalayo ngokuya ngezidingo zomsebenzisi lingenziwa ngezifiso elenziwe ngemininingwane ehlukahlukene, osayizi, i-aluminium alloy cover onqenqemeni, ingavinjelwa, ingabi nothuli, ibukeke kahle futhi iphane. Ibhokisi lenzuzo elithambile le-pp alinabo ubuthi, alinambitheki, alinamswakama, alinamanzi, limelana nokugqwala, isisindo esincane, lihlala isikhathi eside, liyabambeka, libukeka lihle, umbala ocebile, umsulwa, uvuseleleke kabusha, ukuvikelwa kwemvelo, akukho ukungcola nezinye izici.
Izinzuzo zebhokisi lokungena kufanele zaziwe yiwo wonke umuntu. Inobungani bemvelo, ihlala isikhathi eside, iyonga futhi iyasebenziseka. Ngakho-ke, ibhokisi lemali engenayo alihlukaniseki ezinhlelweni zezwe lami nakwezinye izimboni ezibalulekile. Kunezinhlobo eziningi zezinto zokusetshenziswa zokukhiqiza, kanti eyodwa ejwayelekile yi-PP eziyize. Izinto zebhodi.
Imikhiqizo yebhodi engenalutho ejwayelekile inezinzuzo zokungenwa ngamanzi, ubufakazi bomswakama, anti-corrosion, anti-vibration, isisindo esincane, njll. Ngokuyisisekelo, akukho ukushiyeka. Ngaphandle kokuthi ikhasimende lidinga imikhiqizo noma amabhokisi adlula uhla oluphethe umthwalo webhokisi elingenalutho lokungeniswa kwebhodi, khona-ke eminye imikhiqizo enjengokuthi (Amabhokisi entengo wePlastiki, amabhokisi okuqoqa) neminye imikhiqizo ishintshiwe, kepha intengo yayo iphindwe kaningi kuneyomgodi amabhodi. Ngaphezu kwalokho, amabhokisi entengo epulasitiki namabhokisi wokuqoqa nawo anokubi okuningi:
Amabhokisi entengo epulasitiki abizwa nangokuthi amabhokisi we-PP noma we-PE. Zingahle ziqhekeze enyakatho noma ngenxa yezinga lokushisa eliphansi ebusika. Uma kusetshenziswa izinto ezijiyile ukumelana nokushisa okuphansi, kungakhuphula isisindo sebhokisi lonke. Isisindo senza abasebenzi bazizwe bekhandla ekuthuthweni nasekuphatheni, futhi intengo yebhokisi izobiza kakhulu ngemuva kokukhuphuka, futhi izophinde ibe nomthelela othile ezithakazelweni zomnotho zawo wonke umuntu. Ngokuvamile, izinzuzo zamabhokisi okuphuma epulasitiki zidlula izilinganiso, futhi kulula kakhulu ukuzisebenzisa. Abantu abaningi basazimisele ukukhetha amabhokisi engeniso ale nto.
Langaphambilini pp lukathayela wokugcina wezinyoni
Olandelayo: pp ipayipi lesikhumba elingenalutho